ကုန်သွယ်ရေးအမိန့်အမျိုးအစားများ - အကောင်းဆုံး Forex EA ရဲ့ | ကျွမ်းကျင်သူ Advisors အကြံပေးအဖွဲ့ | FX စက်ရုပ်
ဤသည်မှမရရှိနိုင်ပါအသုံးအများဆုံးအမိန့်အမျိုးအစားများတခုတခုအပေါ်မှာဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် MT4 ပလက်ဖောင်းနှင့်မည်သို့သူတို့ကိုစနစ်တကျသုံးစွဲဖို့။ ကျနော်တို့အကျဉ်းအောက်ပါအမိန့်အမျိုးအစားများအတွက်ဆနျးစစျလိမျ့မညျ:
Market ကအမိန့် (လက်ငင်း Execution နှင့် Close ကိုအမိန့်)
stop မိန့် (stop ရောင်း, stop Buy)
ကန့်သတ်မိန့် (ယ်ယူရန်ကန့်သတ်မိန့်, ကန့်သတ်ရောင်းချ အမိန့်)
စံထွက်ပေါက်: ဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့် နှင့်အမြတ်ကိုယူ
သူတို့နှင့်အတူ, အသီးအသီးအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုဘို့နည်းလမ်းနဲ့အကြောင်းပြချက်သရုပ်ဖော်လိမ့်မည် အားသာချက်များ နှင့်အားနည်းချက်များကို။
သငျသညျခကျြခငျြးဖော်ပြပါတယ်ဖြစ်စေသောစျေးကွက်ပေါက်စျေးမှာတစ်ဦးအမိန့် execute ဖို့လိုတဲ့အခါတစ်ဦးကစျေးကွက်အမိန့်, အမိန့်၏အသုံးအများဆုံးအမျိုးအစား, အသုံးပြုသည်"လေလံ" or “ တောင်း” သင့်ရဲ့ screen ပေါ်မှာစျေးနှုန်း။ သင်တစ်ဦးငွေကြေးတစ်စုံကိုဝယ်ခြင်းငှါသွားနေတယ်ဆိုရင်, သင်မှာဝယျပါမညျ “ တောင်း” သင်တစ်ဦးငွေကြေးကိုရောင်းဖို့စျေးနှုန်းနှင့်သွားလျှင်, သင်မှာရောင်းချလိမ့်မည် "လေလံ" စျေးနှုန်း။
သငျသညျ Tools များ / သစ်အမိန့်ကိုသုံးနိုင်သည်။
သငျသညျ F9 နှိပ်နိုင်ပါတယ်
သင့်အနေဖြင့်ငွေကြေးဇယား, ထရေးဒင်း / New Order အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါညာဘက်နိုင်ပါတယ်။
အများအားဖြင့်အတူ STP or ECN ပွဲစားများ, သင်မြင်ကိုးကား 10 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုထိပ်တန်းဆင့်ဘဏ်များထံမှကောက်ခံ tradable စျေးနှုန်းများ (အကောင်းဆုံးကိုလေလံနဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကို) အဖြစ်သငျသညျဖမ်းယူကြသည်။ သင်တစ်ဦးအနေအထားဖွင့်လှစ်သို့မဟုတ်ပိတ်ဖို့ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်, သင့်အလို့ငှာအဆိုပါငွေဖြစ်လွယ်ပေးသူမှတိုက်ရိုက်စျေးကွက်အပေါ်မရရှိနိုင်ပါကအကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းမှာကွပ်မျက်ခံရလိမ့်မည်။
ဘယ်လိုပေါ် မူတည်. ပှဲစား သူတို့ရဲ့ကွပ်မျက်နည်းပညာကိုထူထောင်ခဲ့သည်, သင့်စျေးကွက်ကိုအမိန့်တစ်ခုဖြစ်စေတစ်ဦးအဖြစ်ထုတ်လုပ်ပြီးလိမ့်မည် လက်ငင်း Execution or Market က Execution။ ကွာခြားချက်ကဘာလဲ? တစ်ချက်ချင်းကွပ်မျက် ပှဲစား စျေးကွက်သေဒဏ်စီရင်သော်လည်း, တစ်ဦးကသင်၏ဈေးကွက်အမိန့်အတိုင်းရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုနေရာနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအမြတ်အစွန်းယူသင့်အားခွင့်ပြု ပှဲစား သင်တစ်ဦးကနဦးရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုမရှိဘဲ, သာစျေးကွက်အမိန့်နေရာနှင့်အမြတ်အစွန်းယူထားပါတယ်။ အမိန့်ကွပ်မျက်ခံရခဲ့ပြီးမှသာသင်ပြန်သွားပြီးရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုများပါဝင်သည်နှင့်အမြတ်အစွန်းယူဖို့အမိန့်မွမ်းမံနိုင်ပါသည်။ သူတို့ကိုဘယ်လိုခွဲပြောပြနိုင်မလား? သငျသညျစျေးကွက်အမိန့်ပြတင်းပေါက်ဖွင့်လှစ်တဲ့အခါမှာ, သင်အလျင်အမြန်ဂုဏ်ထူးဆိုတာတွေ့ရနိုင်ပါတယ်။
Market ကအမိန့်အဖြစ် လက်ငင်း Execution:
သငျသညျ, သင်တို့ကို (ဒီဥပမာထဲမှာ 0.01 = 1 မိုက်ခရိုတွေအများကြီး) ကုန်သွယ်မှုချင်မည်မျှစာရေးတံသော, volume ကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဒီဝင်းဒိုးကိုရွေးချယ်စရာရှိဒီမှာရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်အကျိုးအမြတ်မယူသည့် option ကို (ပထမသဲလွန်စ) တွေ့နိုင်ပါသည် နှင့်သင်တန်း၏, ထိုသို့အမျိုးအစားလယ်ပြင် (ဒုတိယပိုသိသာသဲလွန်စ) တွင်လက်ငင်း Execution ကပြောပါတယ်။ သင့်ရဲ့ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုညွှန်ပြနှင့်သင်တို့၏အမိန့်အဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာအမြတ်အစွန်းယူနိုင်ခဲ့ဖြစ်ခြင်းအလွန်အသုံးစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်သာတစ်ဦးကစျေးကွက်ကွပ်မျက်အမျိုးအစားခဲ့လျှင်သင်လုပ်ဖို့လိုရာ, သင်နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကိုအတွက်ဖြည့်စွက်၏ဒုက္ခကိုကယ်တင် ပှဲစား။ စဉ်းစားရန်စျေးကွက်ကိုအမိန့်၏အခြားအင်္ဂါရပ်များ။ သင်တစ်ဦးငွေကြေးတစ်စုံကိုဝယ်ခြင်းငှါသွားလျှင်အထက်ပါဥပမာမှာ, သင်အပြာဝယ်သေတ္တာအဖြစ်မြင်ယောင်နိုင်ပြီး, သငျသညျအစရှိအပြာရောင်ကို tick ဇယားအတိုင်းဤစျေးနှုန်းတွေ့နိုင်ပါသည်ရသောမေးမြန်း (ယ်ယူရန်) စျေးနှုန်းမှာဝယျပါမညျ ဇယားပြတင်းပေါက်။ သင်တစ်ဦးငွေကြေးကိုရောင်းဖို့သွားကြသည်လျှင်, သင်အနီရောင်ရောင်းသေတ္တာအဖြစ်မြင်ယောင်နိုင်ပြီး, သငျသညျအစအနီရောင်ကို tick ဇယားအတိုင်းဤစျေးနှုန်းတွေ့မြင်နိုင်သည်သောလေလံ (ရောင်း) စျေးနှုန်းမှာရောင်းချလိမ့်မည်။ သငျသညျကိုးကားစျေးနှုန်းမှအများဆုံးသွေဖည်ဖွင့်နိုင်သည်ကိုဘယ်လိုလည်းသတိပြုပါ။ သင်သည်သင်၏ဆန္ဒရှိသွေဖည်အဖြစ်5pips ညွှန်ပြလျှင်, တတ်နိုင်သမျှသင့်ရဲ့အမိန့်များအဖြစ်တာကလက်ရှိကနေ5pips ထက်မပိုပြည့်စုံလိမ့်မည်။ စျေးနှုန်းရုတ်တရက်ထက်ပိုပြီးလှုံ့ဆော်ပေးလျှင်, အမိန့်ပြည့်စုံလိမ့်မည်မဟုတ်။ ဒီမှာအားသာချက် slippage နှင့်စျေးသေသေချာချာထိန်းချုပ်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Market ကအမိန့်အဖြစ် Market က Execution:
ယခင်ကျနော်တို့ဘယ်လိုချက်ချင်းသေဒဏ်စီရင်မှာကြည့်ရှု ပှဲစား တစ်မှတ်တိုင်ဆုံးရှုံးမှုထည့်ပါသို့မဟုတ်စျေးကွက်အမိန့်နှင့်အတူအမြတ်အစွန်းယူနိုင်စွမ်းကိုပေးတော်မူ၏။ ကနည်းလမ်းမှအားသာချက်အမြန်နှုန်းနှင့်အဆင်ပြေသည်။ အထက်စျေးကွက်ကွပ်မျက်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည် ပှဲစား သင်တို့ကိုသာတစ်ပြိုင်နက်တစ်မှတ်တိုင်အရှုံးနေရာသို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းယူနိုင်စွမ်းမရှိ, စျေးကွက်အမိန့်နေရာခွင့်ပြုပါတယ်။ ဘယ်လိုရပ်တန့်အရှုံးသတိထားမိခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်း boxes တွေကိုယူသင်စျေးကွက်အမိန့်နှင့်အတူသူတို့ကိုသုံးနိုငျအဓိပ္ပာယ်ထွက် greyed နေကြသည်။ ဤအမျိုးအစားမှနောက်ထပ်အားနည်းချက် ပှဲစား သင်မှာ execute ချင်ကိုးကားစျေးနှုန်းမှ pips အတွက်အများဆုံးသွေဖည်မသတ်မှတ်ထားနိုငျသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဤအမျိုးအစားမှအကောင်းအဆိုး ပှဲစား သူတို့ယေဘုယျအားဖြင့်တစ်ဦးမှတက်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိကြောင်း STP or ECN / အစားစျေးကွက်ထုတ်လုပ်သူများ, အငွေဖြစ်လွယ်ပေးစျေးနှုန်းတွေကိုတောင်းတာအကောင်းဆုံးလေလံနည်းပညာကြောင့်လမ်းကြောင်းအမိန့်ကိုတိုက်ရိုက် ပှဲစား ကုန်သွယ်ရေး၏အခြားဘက်ခြမ်းအပေါ်ယူပြီးနှင့်အကျိုးဆက်စံပြစျေးနှုန်းတွေသို့မဟုတ်သေဒဏ်စီရင်အမြန်နှုန်းထက်လျော့နည်းပို့ဆောင်။
Market မှာအမှာစာများ (လက်ငင်းသို့မဟုတ်ဈေးကွက်ကွပ်မျက်ဖြစ်စေ) အား Pros
တစ်ဦးကစျေးကွက်အမိန့်ချက်ချင်းကွပ်မျက်တောင်းဆိုပါသည်, သင်ကျိန်းသေကုန်သွယ်ရေးအတွက်ဖြစ်လိုတဲ့အခါဒီကောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် ယခု, နှောင့်နှေးခြင်းမရှိဘဲ။
သောကြောင့် Forex ၏ငွေဖြစ်လွယ်၏, စျေးကွက်ကိုအမိန့်ယေဘုယျအားဖြင့်သင့်ရဲ့ကိုးကားလေလံမှာပွညျ့စုံနှင့်နိမ့်ဆုံး slippage, Re-quote နှင့်အမှားနှင့်အတူစျေးနှုန်းများမေးပါ။
Market ကအမိန့်မှ Cons
တစ်ခါတလေတစ်ဦးကစျေးကွက်အမိန့်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောအရေးကြီးသည့်သတင်းကြေညာချက်အတွင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေအဖြစ်အပြင်းအထန်မတည်ငြိမ်သောကာလ, စဉ်အတွင်း slippage နှင့် re-quote မှခံစားတတ်နိုင်ပါတယ်။ သင်စျေးနှုန်းမဟုတ်ဘဲသေချာပေါက်အသောကွောငျ့ re-ကိုးကားမည်အကြောင်း, ပှဲစား ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသင်တို့နှင့်အတူရှိဝက်အူဖို့ကြိုးစားနေသော်လည်း, လက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးလျှင်မြန်စွာပြီးခဲ့သည့်ဈေးကွက်လျှပ်တစ်ပြက်ကတည်းကပြောင်းလဲကြပေမည်။ အကြောင်းမူကား,
ပိုမိုမြန်ဆန် Market ကအမိန့်ကိုဖွင့်ရန်အေးမြ Scripts:
သင်သည်သင်၏ထွက်သင့်ရဲ့စျေးကွက်ကအမိန့်ပေးပို့နိုငျသော script များတဲ့အရေအတွက်၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါသည် MT4 အမိန့်ပြတင်းပေါက် box ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒရှိ volume အ inputting ထက်ပိုမြန်, အရှုံးကိုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်အမြတ်အစွန်းစျေးနှုန်းအဆင့်ဆင့်ယူပါ။ စတိဗ် Hopwood တစ်ဦးဝယ်ဖန်တီးသင်အလွယ်တကူအလွယ်တကူစျေးကွက်အမိန့် execute ရန်သင့်ဇယားပြတင်းပေါက်မှဖြတ်ပြီး script ကို Drag ဆွဲပြီးအဆင်ပြေဖို့အပြင်, သင့်ကို manual စျေးကွက်ကိုအမိန့်အနည်းငယ်ထပ်တိုးအမှုအရာကိုစိတ်ကြိုက်ဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းဈေးကွက်အမိန့် script များရောင်းချပြီ
ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှု Set နှင့်အမြတ်အစွန်းကို ယူ. , စျေးနှုန်းသို့မဟုတ် pips တစ်ခုခုကိုအဖြစ်
Market က Close ကို: စျေးကွက်မှာပိတ်ကုန်သွယ်ရေး
အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အမိန့်၌, သင် Terminal နှင့်အတွင်းကနေပွင့်လင်းစေရန်အတွက်အပေါ်ညာဘက်ကလစ် နှိပ်. နှင့်ကို select လုပ်ပါရန်လိုအပ်ပါတယ် Close ကိုအမိန့်.
ပေါ်လာသော box ကိုအရမ်းအများကြီးလက်ငင်း Execution Box ကိုတူပေမယ့်ယခု 0.04 မှာ 112.1000 EURJPY ကိုဝယ် #xxxxx Close ကိုကိုခေါ်အဝါရောင်အတွက်မီးမောင်းထိုးပြသေတ္တာလည်းရှိ၏။ အဖွင့်အမိန့်တစ်ခုဝယ်ခဲ့တယ်, ကကိုးကားလျှင်အကိုးကားအနီးကပ်စျေးနှုန်းကိုးကားလေလံ (ရောင်း / အနီရောင်) စျေးနှုန်းသည် (အပြာ / ဝယ်ခြင်း) ကိုဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်တစ်ဦးကိုရောင်းခဲ့လျှင်စျေးနှုန်းမေးကြည့်ပါ။ သင်ဤအဝါရောင်ဘားကိုနှိပ်လျှင်, သင်၏လက်မှတ်အမိန့်ချက်ချင်းလက်ရှိစျေးကွက်ပေါက်စျေးမှာပိတ်ထားကြလိမ့်မည်။ ဤသည်နီးကပ်သောစျေးနှုန်းအသစ်စျေးနှုန်းများနှင့်အတူတိုင်းဒုတိယ updates များကိုစောင့်ရှောက်, ဒါကြောင့်သင်ဖွင့်လှစ်ပါကစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်စျေးနှုန်းများသငျသညျဘားနှိပ်မီကသငျသညျချင်ဘယ်မှာမှရွှေ့စေနှင့်နိုင်ကိုးကား။
အေးမြ Scripts ပိုမိုမြန်ဆန်ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်လိုက်ရန်:
သငျသညျပိုမြန်မဟုတ်ရင်ထက်သင့်ရဲ့အမိန့်ကိုပိတ်ဖို့နိုငျသော script များတဲ့အရေအတွက်၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ်။ အ script များထံမှအောက်က script များဆွဲပါသင်အလိုရှိသောအဆင့်မှာသင့်ရဲ့အရောင်းအထွက်ကိုပိတ်ဖို့ရန်ဇယားပြတင်းပေါက်ကူးဖိုင်တွဲ။
Pipsing_Close_on_Drop.mq4 nice! (ကအလျားလိုက်စိမ်းလန်းသောလိုင်း dashed အဖြစ်မြင်ရပါလိမ့်မည်) ဇယားအပေါ်ကုန်သွယ်မှုဖွင့်လှစ်ရန်နီးစပ် script ကိုလွှတ်ချလိုက်ပါ။
CloseAtEquityAmount_v1.0_Above.mq4 လာသောအခါရှယ်ယာ> X ကိုအရောင်းအပိတ်
CloseAtEquityAmount_v1.0_Below.mq4 လာသောအခါရှယ်ယာ <X ကိုအရောင်းအပိတ်
CloseTrades_After_Account_Loss_TooMuch.mq4 ဆုံးရှုံးမှုကိုရေပေါ်သည့်အခါကုန်သွယ်မှုပိတ်ခြင်း - X
အဆိုင်းငံ့အမိန့်ရပ်စျေးကွက်ကိုအမိန့်မှမတူဘဲ, အမိန့်သင်ရှေ့ဆက်သို့မဟုတ်နောက်သို့ဆုတ်သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ဦးတည်ချက်ကိုကနေ, တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသောစျေးနှုန်းမှာပြည့်ဝကြလိမ့်ချင်တယ်။
ဆိုင်းငံ့အမိန့်နှစ်မျိုးရှိတယ်: အမိန့်ကိုရပ်တန့် နှင့် ကန့်သတ်အမိန့်.
ဆိုင်းငံ့ရပ်တန့်သို့မဟုတ်ကန့်သတ်အမိန့် entries တွေကို၏ပုံစံအတွက်လာဆိုင်းငံ့ရပ်တန့် entry ကိုမိန့်သို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ရပ်တန့်ကန့်သတ်အမိန့်ဟုခေါ်ကြသည်။ entry ကိုအမိန့် (စျေးနှုန်းညှနျကွားခအတည်ပြုဖို့) အမိန့်ပြည့်စုံလိမ့်ရန်သင့်ရည်ရွယ်စျေးနှုန်းညှနျကွားခ၏ရှေ့ဆက်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, entry ကိုအမိန့်ကန့်သတ်ရပ်တန့်သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်စျေးနှုန်းညှနျကွားခ (ပိုကောင်းသောစျေးနှုန်းမှာရိုက်ထည့်ရန်) ၏ယာယီ retracement အတွက်နောက်ပြန်ပြည့်ဝဖို့အမိန့်ရှိပါတယ်။
ရပ်တန့်ပါနှင့် ကန့်သတ်အမိန့် အဖြစ်ကောင်းစွာပိတ်အဖြစ်ပုံစံလာနိုင်ပါတယ်။ ဘုံထွက်ပေါက်, ဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်နေ, တစ်ဦးဆိုင်းငံ့ရပ်တန့်နိုင်ရန်ဖြစ်ပါသည် အမြတ်ကိုယူ ဆိုင်းငံ့ထားသောကန့်သတ်အမိန့်ပါပဲ။ ကျနော်တို့ကဆိုင်းငံ့ entry ကိုအမိန့်ဖုံးအုပ်ပြီးနောက်, ဤဆနျးစစျလိမျ့မညျ။
တစ်ဦးကရပ်တန့်နိုင်ရန်၎င်း၏စျေးနှုန်းကကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော entry ကိုသို့မဟုတ်ထွက်ပေါက်စျေးနှုန်းရရှိ၏ကြီးမြတ်သောဖြစ်နိုင်ခြေကိုသေချာစေရန်အလို့ငှာ, တစ်ဦးအထူးသဖြင့်အမှတ်ကျင့်ထက်မလွန်သောအခါငွေကြေးရောင်းမဝယ်တစ်ခုအလို့ငှာဖြစ်ပါတယ်။ စျေးနှုန်းကြိုတင်သတ်မှတ်ထားဝင် / ထွက်ပေါက်အမှတ်ကျင့်ထက်မလွန်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ထိုမှတ်တိုင်အမိန့်စျေးကွက်အမိန့်ဖြစ်လာသည်။
A မဝယ်-stop အမိန့် တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသောပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းမှာငွေကြေးတစ်စုံကိုဝယ်ခြင်းငှါဆိုင်းငံ့ထားဝယ်အမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။
A ရောင်း-stop အမိန့် တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသောအနိမ့်သောစျေးနှုန်းမှာငွေကြေးတစ်စုံရောင်းဖို့ဆိုင်းငံ့ထားရောင်းအမိန့်ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်တွင် MT4 ဝင်ခံတစ်ဦးဝယ်ရပ်တန့်နိုင်ရန်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
ဤတွင်ဤဥပမာကိုငါမယ့်အစားတစ်ဦးလက်ငင်း Execution ၏, တကရွှေ့ဆိုင်းမိန့်သောအမျိုးအစားလယ်ပြင်၌ညွှန်ပြနေပါတယ်, အခုထိုကဲ့သို့သောအမျိုးအစားအဖြစ်ရွှေ့ဆိုင်းမိန့်အဘို့လယ်ပြင် parameters တွေကို, (ဥပမာထဲမှာငါဝယ် Stop ညွှန်ပြ) (စျေးနှုန်းမှာရှိပါတယ် ဥပမာထဲမှာငါ (ငါကုန်ဆုံးညွှန်ပြကြပါဘူးဒါပေမဲ့ငါကအစဉ်အမြဲကြာရှည်ရပ်တန့်မဝယ်ရှိသည်ဖို့မလိုကြပါလျှင်အသုံးပြုနေရာလေးကိုဖြစ်ပါတယ်)) 1.2838 မှ ထား. , သက်တမ်းကုန်ဆုံးပြီ။ လက်ဝဲဖို့ကို tick ဇယားခုနှစ်တွင်, ငါ့ designated ဝယ်ရပ်တန့် entry ကိုအမှတ် 10 pips လက်ရှိလေလံ (အပြာ) ကိုးကားစျေးနှုန်းအထက်မီးခိုးရောင်လိုင်းအဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ စျေးကွက်ငါ 0.01 အသေးစားအမြောက်အမြားနှင့်ပြည့်စုံသူဖြစ်ကြောင်းကိုစျေးနှုန်းတက်ရောက်ရှိ။
အမိန့်ကုန်သွယ် breakouts များအတွက်သုံးစွဲဖို့ကောင်းတစ်ဦး method ကိုဖြစ်ကြသည်ရပ်တန့်ပါ။ ဥပမာအားဖြင့်, အပေါ်ကဥပမာကိုအသုံးပြုပြီး, ငါကဒီခုခံ level ကိုချိုးလျှင်, မြင့်မားကုန်သွယ်မှုဆက်လက်နိုငျသောစဉ်းစားနေပါတယ်, ငါဖြစ်ချင်တယ်ကြောင့် EURUSD ့စျေးကွက်၏နောက်ဆုံးမြင့်မားအထက် 1.2838 ၏မှတ်တိုင်အမိန့်ကိုဝယ်ထားကြပြီ အကွဲအမှတ်မှာဒီကုန်သွယ်ရေးအပေါ်၌တည်၏။
ဈေးကွက်ဖွင့်သို့မဟုတ်ကဆင်းတဲ့နညျးလမျးရွှေ့ဖို့သင်အနေအထားဝင်ရောက်မီသောကြောင့်, သင်က run ကိုသို့မဟုတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ် point ရဲ့အဆုံးမှာဝင်များ၏အန္တရာယ်ရှိပါတယ်
တော်လှန်ရေးနှင့်ထောက်ခံမှုအစားလပ်ချိန်၏ရရှိထားသူမျှော်လင့်သူတို့သည်သင်၏ရပ်တန့်အမိန့်အားဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ကန့်သတ်မိန့်ကိုတင်ကြောင်းအဓိပ်ပာယျ breakouts ညှိုးနွမ်းလိုတဲ့သူကုန်သည်တစ်ဦးအရေအတွက်ရှိပါတယ်,
သငျသညျကိုသာအသစ်တခုအနေအထားကိုထည့်သွင်းဖို့ဒါမှမဟုတ်တိကျတဲ့စျေးနှုန်းသို့မဟုတ်ပိုကောင်းမှာလက်ရှိအနေအထား exit လုပ်ဖို့ဆန္ဒရှိကြသောအခါတစ်ဦးကန့်သတ်ချက်အမိန့်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ တစ်ဦးဝယ်ဘို့, ဒါမှမဟုတ်ရောင်းဘို့အထက်ဈေးကွက်ကိုအောက်တွင်အနားယူအဆိုပါကန့်သတ်မိန့်, သာစျေးနှုန်းသို့မဟုတ်ပိုကောင်းမှာစျေးကွက်အရောင်းအလျှင်ပြည့်စုံလိမ့်မည်။
A ကန့်သတ်-ဝယ်နိုင်ရန် တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသောအနိမ့်သောစျေးနှုန်းမှာငွေကြေးတစ်စုံကိုဝယ်ခြင်းငှါဆိုင်းငံ့ထားသောအမိန့်သည်။
A ကန့်သတ်-ရောင်းအမိန့် တစ်ဦးသတ်မှတ်ထားသောပိုမိုမြင့်မားသောစျေးနှုန်းမှာငွေကြေးတစ်စုံရောင်းဖို့ဆိုင်းငံ့ထားသောအမိန့်သည်။
အောက်တွင် MT4 အတွက်ကန့်သတ်-ဝယ်နိုင်ရန်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်:
ငါ 1.2858 pips7၏လက်ရှိဈေးကွက်ဝယ်စျေးနှုန်းအောက် 1.2866 ၏ယ်ယူရန်ကန့်သတ်အမိန့်ခန့်ထားပြီ။ ငါသည်အထက်သို့ပြောင်းရွှေ့အပေါ်တစ်ဦး7PIP အားသာချက်ရရှိရန်အလို့ငှာပြည့်ဝပါ၏ရှေ့တော်၌ထိုဈေးကွက်ကိုအနည်းငယ်ချ creeps မျှော်လင့်ပါတယ်။ ငါတိုတောင်းဖို့ကုန်သွယ်ရေးလိုခငျြလြှငျ, ငါတစ်အောက်ဖက်သို့ပြောင်းရွှေ့အပေါ်ပိုကောင်းတဲ့စျေးနှုန်း၏အားသာချက်ယူမှဘယ်နေရာမှာမဆိုကိုးကားရောင်းစျေးနှုန်းအထက်တွင် ထား. ရောင်းန့်သတ်ချက်ရှိနိုငျတယျ။
အ breakouts နွမ်းအဘို့ကောင်းသော
လွတ်သွားသောအခွင့်အလမ်း: တခါတရံမှာစျေးနှုန်းတက်မရောက်ရှိပါဘူးသို့မဟုတ်လှဲချသင့်ရဲ့ကန့်သတ်အမိန့်ငှါ၎င်း, စျေးကွက်သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ဦးတည်ချက်ကို၏မျက်နှာသာအတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခရီးထွက်ကြသောအခါသင်တို့ကိုစီးနင်းလက်လွတ်။
cool Scripts မြန်ရွှေ့ဆိုင်း Entry 'အမိန့် Enter ရန်:
အများစုမှာဆိုင်းငံ့ထား entry ကိုအမိန့်တစ်ခု5ခြေလှမ်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်အမိန့်ပြတင်းပေါက်ကနေတစ်ဆင့်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်:
ပွင့်လင်း New Order ပြတင်းပေါက်
ကို Select လုပ်ပါအမျိုးအစား: ဆိုင်းငံ့ထားအမိန့်
ကို Select လုပ်ပါအမျိုးအစား:, ကန့်သတ် Buy ကန့်သတ်ရောင်း, ဝယ် Stop, Stop ရောင်းရန်
တိကျသောစျေးနှုန်းကို Select လုပ်ပါ
ဒီဖြစ်စဉ်ကိုစက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ကျေးဇူးတင်စရာပိုမြန်ဆိုင်းငံ့အမိန့်မိန့်နိုငျသော script များရှိပါတယ်။
ငါသည်သင်တို့၏ရပ်တန့် entry ကိုရိုက်ထည့်ဒါမှမဟုတ်စံလမ်းထက်အများကြီးပိုမြန် entry ကိုအမိန့်ကန့်သတ်နိုင်သောအေးမြ script ကိုဖြတ်ပြီးပြေးကြပြီ။ သင်ရုံသင်ဆိုင်းငံ့အမျိုးအစားချင်တယ်ဆိုရင်သင်ကဖြစ်ချင်မူတည်ပြီးလက်ရှိစျေးနှုန်းအထက်သို့မဟုတ်အောက်ကဇယားကူးဖိုင်တွဲအ script များထံမှအောက်က script ကိုဆွဲယူ:
DROP_PENDING_BUY တစ်ဦးဝယ်ကန့်သတ်များအတွက်စျေးနှုန်းအောက်မှာတစ်ဦးဝယ်ရပ်တန့်ဘို့အစျေးနှုန်းကျော် drop
DROP_PENDING_SELL တစ်ဦးကိုရောင်းန့်သတ်ချက်စျေးနှုန်းကျော်, တစ်ဦးကိုရောင်းရပ်တန့်ဘို့အစျေးနှုန်းအောက်မှာ drop
DROP_MOVE_PENDING_PRICE အမှတ်မှရပ်တန့် / ကန့်သတ်ရွှေ့ဖို့စျေးနှုန်းအောက်တွင် / ကျော် drop
ကံမကောင်းစွာ၏အမိန့်ပြတင်းပေါက် box ကို MT4 display တွေဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်နှင့်စိတ်ကြိုက်စျေးနှုန်းအဆင့်ဆင့် (မ pips) အဖြစ်အမြတ်ယူပါ။ သငျသညျရှိပြီးသား SL သို့မဟုတ် tp ပြုပြင်မွမ်းမံချင်တောင်မှအခါ, ကစျေးနှုန်း (မ pips) ကအမှုကိုပြုခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ထို့အပြင်သူကထည့်သွင်းခြင်းနှင့် SL နှင့် tp ပြုပြင်မွမ်းမံ, တစ်ဦးအစာရှောင်ခြင်းရွေ့လျားနေသည့်ဈေးကွက်မှာလည်းနှေးကွေးစက္ကန့်ဖြစ်နိုင်သည့်အနည်းဆုံးအနည်းငယ်ခြေလှမ်းများကြာပါတယ်။
ကံကောင်းထောက်မစွာ, အ SL သို့မဟုတ် tp အလျားလိုက်လိုင်းနှင့်သူတို့တက်ဆွဲသို့မဟုတ်ဆင်းအပေါ်ကို double click နှိပ်ခြင်းဖြင့်, (စျေးနှုန်းနှင့် pips နှင့်ကြွက်ပေါက်ကဲ့သို့) SL သို့မဟုတ် tp ထည့်သွင်းသူတို့အားယင်ကောင်အပေါ်လက်ရှိအဆင့်ချိန်ညှိတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့နည်းလမ်းများရရှိရန် script များရှိပါတယ်။
ဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့်: ကုန်သွယ်ရေးထွက်ပါမည်များအတွက် Stop မိန့်အသုံးပြုခြင်း
stop အမိန့်များအားဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်အသုံးပြုကြသည်။ သင့်ရဲ့ဆုံးရှုံးမှုကန့်သတ်များ၏ထိရောက်မှုအရှိဆုံးနည်းလမ်းတစ်ခုမှာတစ်ဦး Pre-စိတ်ပိုင်းဖြတ်ရပ်တန့်နိုင်ရန်တဆင့်ဖြစ်ပါတယ်, အများအားရပ်တန့်-ဆုံးရှုံးမှုကိုခေါ်။
အောက်တွင်ရပ်တန့်အရှုံးနှင့် တွဲဖက်. အသုံးပြုခံတစ်ဦးဝယ်ရပ်တန့်နိုင်ရန်၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့ငါရှိ Stop မိန့် Buy 1.2837 ၏စျေးနှုန်းမှာပဲနောက်ဆုံးမြင့်မားအထက်နှင့်ကို tick ဇယားအပေါ်တစ်ဦးမီးခိုးရောင်လိုင်း, လက်ရှိဝယ်စျေးနှုန်းအထက်4pips အဖြစ်ပုံပေါ်ပါတယ်။ ငါသည်လည်းငါ၏အဝယ်ရပ်တန့်နိုင်ရန်အောက်ကကို tick ဇယားအပေါ်တစ်ဦးအနီလိုင်းအဖြစ်ပုံပေါ်သော 1.2827 တစ်မှတ်တိုင်ဆုံးရှုံးမှု, 10 pips ညွှန်ပြကြပြီ။ ဈေးကွက်ဖွင့်လှုံ့ဆျောနှင့် 1.2837 မှာငါ့ကိုဖြည်လျှင်ထို့ကြောင့်, ငါ့မှတ်တိုင်မှာအရှုံး 1.2827 မှာတက်ကြွစွာဖြစ်လိမ့်မည်, ငါကကုန်သွယ်ရေးအပေါ် 10 pips ထက်ပိုမဆုံးရှုံးပါလိမ့်မယ်။
သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှု pips ၏တယောအရေအတွက်အားဖြင့်အမြတ်အစွန်းဖြစ်လာပါက, သင့်ရဲ့အမြတ်အစွန်းအချို့ကိုကာကွယ်နိုင်ရန်အတွက်အမြတ်အစွန်းညှနျကွားခ၌သင်တို့၏ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုရွှေ့ဖို့ယေဘုယျအားဖြင့်အကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ တစ်အမြတ်အစွန်းရှည်လျားအနေအထားတွင်သင်သည်သင်၏လက်ရှိအမြတ်အစွန်းအနေအထားဆန့်ကျင်နေတဲ့စျေးကွက်ကိုတဖန်ပြောင်းပြန်လှန်၏အခွင့်အလမ်းဆန့်ကျင်ကစောငျ့ရှောကျဖို့အမိန့်ထဲမှာ, breakeven သို့မဟုတ်အမြတ်ဇုန်ရန်သင့်ရပ်တန့်ရွှေ့နိုင်ပါတယ်။ သင်သည်လည်းသင်၏အကုန်သွယ်မှုရှူဖို့အခန်းရှိသည်ဖို့ခွင့်ပြုချင်သောကွောငျ့အချိန်မတိုင်မီတစ်ဦးအရေးမဆုံးမသောအပေါ်ထွက်၏အစားပျံသန်းဖို့အခမဲ့ဖြစ်, သင်သည်သင်၏ရာထူးသို့မဟုတ်အမြတ်အစွန်းကာကွယ်ပေးဖို့သင့်ရဲ့ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုလှုံ့ဆျောပေးသငျ့သောအခါအဘို့အမြတ်အစွန်းခုံအလှည်တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ပါတယ်အဆုံးအဖြတ် ။
ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်မှုအားမရမတိုင်မီအရပျ၌ရပ်တန့်အရှုံးအမိန့်ရှိသည်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆသည်နည်းတူ, ကရာအရပျထဲမှာအမြတ်အစွန်းပစ်မှတ်ရှိသည်ဖို့တစ်ဦးအညီအမျှကောင်းသောစိတ်ကူးဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးကန့်သတ်ချက်အမိန့်, သင်သည်သင်၏ Pre-set အမြတ်ရည်မှန်းချက်မှာစျေးကွက်မှထွက်ရန်ခွင့်ပြုတဲ့ယူရအမြတ်ကိုခေါ်။ ,
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့ငါ 1.2873 pips လက်ရှိဝယ်ကိုးကားအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော (ပေါ်မှာ Entry 'နှင့်အတူ) မီးခိုးရောင်လိုင်းအဖြစ်ပေါ်ထွန်း,3၏စျေးနှုန်းမှာသတ်မှတ်ထားယ်ယူရန်ကန့်သတ်အမိန့်ရှိသည်။ ငါသည်လည်းတစ်ဦးကြိုတင်သတ်မှတ်ထားထားကြပြီ ဆုံးရှုံးမှုကိုရပ်တန့် 1.2871 ၏,2pips ငါ၏အရည်ရွယ်ပါသည် entry ကိုအောကျတှငျ, (ပေါ်မှာ SL နှင့်အတူ) အနီရောင်လိုင်းအဖြစ်ပေါ်ထွန်းနှင့် 1.2878 တစ်ယူရအမြတ်အစွန်း, (ပေါ်မှာ TP နှင့်အတူ) အပြာရောင်လိုင်းအဖြစ်ပေါ်ထွန်း။ ဟုတ်ပါတယ်, တဦးတည်းဖွယ်ရှိ entry ကိုကန့်သတ်ရှိသည်မဟုတ်မယ်လို့ကျွန်မသူတို့ကို tick ဇယားပေါ်တွင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်သင်မည်သို့ပြသနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကို crowding ငါရပ်နှင့်ပစ်မှတ်အတူတကွဒါနီးကပ်ထားကြ၏။
Enter ပြီးတော့ Modify Stop ပျောက်ဆုံးခြင်းပြီးတော့မြန်အမြတ်ကိုယူဖို့အတွက်အေးမြညွှန်းကိန်း:
ထည့်သွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံတစ်မှတ်တိုင်အရှုံးသို့မဟုတ်အတွက်အကျိုးမပေးနိုင်ယူ MT4 အနည်းငယ်ခြေလှမ်းများနှင့်စက္ကန့်ကိုယူနိုင်ပါတယ်။ ထိုမှတပါး, အားလုံးပြုပြင်မွမ်းမံတဦးတည်းသီးခြားစျေးနှုန်း scroll ဖို့ကြိုးစားပါတယ်အဖြစ်နှောင့်နှေးစေရန် add နိုင်သည့်တစ်ယောက်တည်းစျေးနှုန်းအနေဖြင့်ပြုသောအမှုနေကြသည်။ စျေးနှုန်း pips နှင့်အလျားလိုက်ဆွဲ / တစ်စက်စျေးနှုန်းအဖြစ်: ကျေးဇူးတင်စရာသင်မျိုးစုံနည်းလမ်းတွေထဲမှာရိုက်ထည့်ပါသို့မဟုတ်ပြုပြင်မွမ်းမံသင့်ရဲ့မှတ်တိုင်အရှုံးသို့မဟုတ်အများကြီးပိုမြန်အမြတ်ငွေအမိန့်ယူ run နိုင်မ script များရှိပါသည်။
Steve.mq4 အားဖြင့်ရှည်လျား Market က ရှည်လျားသောစျေးကွက်အမိန့် Create နှင့်စျေးနှုန်းသို့မဟုတ် pips ဖြစ်စေအဖြစ် SL & tp ထား. , ဒါ့အပြင်မှော်နံပါတ်နှင့်မှတ်ချက် add နိုင်ပါတယ်
Steve.mq4 အားဖြင့်တိုတောင်းသော Market က တိုတောင်းသောစျေးကွက်အမိန့် Create နှင့်စျေးနှုန်းသို့မဟုတ် pips ဖြစ်စေအဖြစ် SL & tp ထား. ,
ဒါ့အပြင်မှော်နံပါတ်နှင့်မှတ်ချက် add နိုင်ပါတယ်
modify_stops_DragDrop.mq4 ဇယား၏ဧရိယာကျဆင်းမှတ်တိုင်များ Add & modify
modify_take_profits_DragDrop.mq4 Add & ဇယား၏ဧရိယာ drop မှအမြတ်အစွန်းယူပြုပြင်မွမ်းမံ
E-MoveSLTPbyMouse.mq4 double click နှိပ်ခြင်း & ဆွဲ SL & tp အလျားလိုက်လိုင်းအားဖြင့်တည်ဆဲ SL & tp modify
ရပ်တန့် Remove losses.mq4 အားလုံးကိုနှင့်ဆိုင်းငံ့အရောင်းအပေါငျးတို့သမှတ်တိုင်များဖယ်ရှားပေးသည်
သင်ကွဲပြားခြားနားသောအမိန့်အမျိုးအစားများ (စျေးကွက်, ရပ်တန့်, ကန့်သတ်) ကိုသိ, သူတို့ကို အသုံးပြု. အဆင်ပြေဖြစ်လာပြီးတာနဲ့, သင်ပိုကောင်းကုန်သွယ်မှုကိုအကောင်းဆုံးရိုက်ထည့်ပါနှင့်မှထွက်ရန်မည်သို့သင့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ အဲဒီမှာအသီးအသီးအမိန့်အမျိုးအစားမှအကောင်းအဆိုး cons ဖြစ်ကြပြီးထိုအသာအလေ့အကျင့်ကတဆင့်လေ့လာသိရှိနိုင်ပါသည်။ အမိန့်အမျိုးအစားကိုသာပုံကိုသိရှိပါကဘယ်မှာအခါနှင့်အတူမကူညီဘူး - သင့်ရဲ့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှတက်ပါလိမ့်မယ်အရာသို့မဟုတ် ဗျူဟာ ဆုံးဖြတ်ရန်။ အဆုံး၌သင်အခြားသူများကိုကျော်ကွပ်မျက်များထဲမှအမျိုးအစားကိုပိုနှစ်သက်စေခြင်းငှါ, သို့မဟုတ်သင်စျေးကွက်အခြေအနေများဆွေမျိုးအမိန့်အမျိုးအစားတစ်ခုပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ပေါင်းစပ် employ ပေလိမ့်မည်။
လက်ငင်း Execution Box ကို
ပွင့်လင်း New Order
စံထွက်ပေါက်: ပျောက်ဆုံးခြင်း Stop နှင့်အမြတ်ကိုယူ
Tools များက New Order